Dhoofinta Mashaariicda ama Video ka iMovie
Marka dhan tafatirka la sameeyo, aad mashruuca waa in la dhoofiyo si ay u jiri karaan sida filim. Waxaa tahay siyaabo kala duwan si ay u dhoofiyaan aad video: dhameystiro mashruuca, badbaadin qaab digital ah ama geliyaan online. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah siyaabaha caadiga ah si ay u dhoofiyaan aad mashruuca mar tafatirka uu soo dhamaaday.
Qeybta 1: dhamestiro iMovie mashaariic Qeybta 2: Dhoofinta iMovie in qaabab kala duwan Qeybta 3: Dhoofinta iMovie inay websites sida YouTube
Qeybta 1: dhamestiro mashaariic iMovie
Si uu u dhameystiro mashruuca iMovie ka dhigan tahay in aad ha iMovie diyaarinayo filimada ee dhan oo ka mid ah tirada suuragal ah in uploading in YouTube, MobileMe, qaar ka mid ah goobaha kale video qaybsiga, iwm dhexe, waaweyn, iyo HD videos doonaa oo dhan ayaa loo abaalgudi. Kuwa mashaariic mahad kama furi doonaa iMovie, laakiin furi doonaa in aad warbaahinta default ciyaaryahanka. Oo haddii aad dhameystiro mashruuc ka hor inta aadan la wadaagin mashruuca, marka aad la wadaagto mashruuca, iMovie ma ku weydiin doonaa inaad doorato video size sababtoo ah in mashruuca ee dhammeystirka mashruuca, iMovie ayaa goobaha videos aad u. Waxaad raaci kartaa tallaabooyinka hoose si uu u dhameystiro mashaariic iMovie aad.
Tallaabada 1. Dooro mashruuc
In Library Project ah, doortaan mashruuc oo dhameystiran si uu u dhameystiro, maxaa yeelay, ka dib markii aad soo dhameeyo mashruuca ee iMovie, haddii wax isbedel in filimka, markaas qoraalkii dhamaystirin waa la tuuri doonaa waxaad samayn.
Tallaabada 2. dhamestiro mashruuca
Tag Files> dhameystiro Project in menu ugu muhiimsan si ay u bilaabaan in ay ugu dambeyn mashruuca iMovie. Geedi socodka qaadan kartaa muddo ah taas oo ku xiran ama mashruuca.
Marka wada hadal ah dhammeystirka baaba'aa, waxay ka dhigan tahay geeddi-socodka dhammeystirka mashruuca ayaa dhameystirtay.
Qeybta 2: iMovie dhoofinta in qaabab kala duwan
Marka aad ku dhameysatay kaalinta sixiddiisa aad filimka, aad u dhoofin karaan in qaabab kala duwan. Just u tag wadaag> dhoofinta isticmaalaya QuickTime ... iyo dooro ikhtiyaarka ah oo ka menu. Laakiin fadlan ogsoonow in, iMovie keli ah tiro kooban oo ah qaabab sida MP4, 3GP, M4V, AVI, FLC, MOV iyo DV . Sidaas darteed haddii aad rabto in aad badbaadin abuurkiinna iMovie in qaab kale sida wmv, FLV, MKV, VOB iyo ka badan, aad leedahay si loogu badalo aad iMovie in qaabab kale la Converter xisbi 3aad ee.
Halkan Video Converter Ultimate for Mac - si weyn lagu talinayaa Converter ah iMovie dhan-in-mid. Waxaa badasha iMovie videos in qaabab kala duwan sida MP4, wmv, FLV, MKV iyo waxay bixisaa filaayo in presets u Final Cut Pro, iPhone, iPad, iPod iyo in ka badan.
Tallaabada 1. Upload video files
Si fudud u badbaadiyo iMovie sida file .mov. Markaas File guji> Upload Media Files si ay u geliyaan gal Video Converter Ultimate ah. Haddii kale, waxaad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi files warbaahinta in video Converter this.
Tallaabada 2. badalo iMovie video files
The Video Converter Ultimate taageertaa kala duwan oo badan oo qaab faylka wax soo saarka. Si loo badalo oo ay qaabab kale u dhoofiyaan aad iMovie, xulo qaab ku Video toolbar ee hoose ee shaashadda oo guji Beddelaan.
Tallaabada 3. Start diinta ama gubasho aad files iMovie
Markii wax walba waa diyaar, ka dhacay badhanka "Beddelaan", ka dibna aad u bedeli karaan iMovie in qaab file ku haboon.
Qeybta 3: iMovie dhoofinta inay websites sida YouTube
Waxa kale oo laga yaabaa in aad rabto in aad la wadaagto dad badan abuurkiinna iMovie. Koombiyuutarka iMovie si online waa doorasho wanaagsan. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah tallaabooyinka iyo talooyin ay u dhoofiyaan iMovie inay websites sida YouTube.
Tallaabada 1. Dooro filim inay geliyaan oo la furo YouTube wadaago suuqa kala
Dooro filim dhameystirtay in aad rabto in aad u geliyaan in YouTube adigoo gujinaya, isagoo Library Project ah. Markaa waa inaad aadaa menu ugu weyn iyo dooran Share> YouTube in la furo YouTube menu geliyaan.
Tallaabada 2. Buuxi xisaabtaada YouTube iyo macluumaad kale oo
Riix badhanka Add ku darto xisaabtaada YouTube iyo buuxi magaca account YouTube iyo sirta ah. Markaas buuxi horyaalka, sharaxaad, tags ku saabsan movie. Waxaad dooran kartaa category ah ee aad movie ee Category. Macluumaad Kuwani ka dhigi doonaa filim ka badan si fudud looga heli by dadka kale ee YouTube. Marka waxaad ku dhammaysaa, ku dhacay "qabtay" si loo badbaadiyo.
Tallaabada 3. Dooro tirada daabacaan iyo wadaagaan iMovie in YouTube
iMovie in YouTube gali kartaa adiga oo movie in mid ka mid ah afar tirada, oo aad dooran kartaa mid ka mid ah sida aad jeceshahay. Ka dib markii doorashada baaxadda daabacaan, hadda guji "Next" oo marka la eego YouTube adeegyada furan, ku dhacay "naadiya" in ay bilaabaan in ay iMovie geliyaan si ay u YouTube si ay ula wadaagaan qoyska iyo saaxiibada.
Marka aad filimka la uploaded in YouTube, daaqad sida hoos ku furi doonaa. Haddii aad rabto in aad u sheegto saaxiib in aad uploaded mid movie in YouTube, waxaad dooran kartaa "sheeg Friend ah" si ay u soo diray link YouTube ku via E-mail. Haddii aad rabto in aad u aragto video aad on YouTube, dooro "View". Oo haddii aad rabto in aad kaliya inuu ku laabto iMovie, ku dhacay "OK".
> Resource > iMovie > iMovie: Dhoofinta Mashaariicda ama Video ka iMovie